ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် Image Optimization - Semalt Expert
ရုပ်ပုံများသည်ဝဘ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံများမပါသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်များသောအားဖြင့်ရုပ်ပုံများရှိသောဆိုဒ်များထက်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပြီး၊
အစုစုက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်၏ display ကို
ဓာတ်ပုံများသည် "ထုတ်ကုန်" များဖြစ်သောဓာတ်ပုံဆိုဒ်များ - ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်းခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်ဓာတ်ပုံပညာစသဖြင့်။
လူမှုကွန်ယက်များ - ဓာတ်ပုံများပါသောပို့စ်များသည်ဓာတ်ပုံများမပါသောပို့စ်များနှင့် status များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းများပြားစွာဖြင့်ဓာတ်ပုံများပါသောပို့စ်များသည်မှတ်ချက်များနှင့်ဝေစုများပိုမိုရရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုလေ့လာမှုများပိုမိုများပြားလာသည်။
ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်မြှင့်တင်ရေး - ပုံများကိုစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်း
သင်သည်ဓာတ်ပုံ site များ/image repositories မှဓါတ်ပုံများကို ၀ ယ်ယူပြီးဝယ်ယူခဲ့ဖူးပါသလား။ သင်သည် SEO အတွက်ရည်ရွယ်ထားသင့်သည်။
Google Image Promotion သည်တစ်ခုဖြစ်သည် website အသွားအလာတိုးမြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ အချို့သောနေရာများ - အထူးသဖြင့်အမြင်အာရုံဘက်ကိုအာရုံစိုက်သောသူတို့ကို။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များရှိနေသော်လည်းပုံများကိုမတော်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် site ကိုကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ အတွက်ပုံရိပ်တွေ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြောင်းပြောနေတာအခါ အော်ဂဲနစ်မြှင့်တင်ရေး၏အခြေအနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချို့ကိုလည်းမှတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ပုံရိပ်များကိုမသင့်တော်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသိသာစွာသက်ရောက်နိုင်သည်။
အခြေခံပုံရိပ် optimization rules:
တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုလိုသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်း၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမခံရပါ။ ထောက်ခံချက်မှာအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာလျှော့ချစရာမလိုဘဲ (စာလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းမှ) ပုံများကိုအမြင့်ဆုံးအထိ "အကောင်းဆုံး" ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အောက်ပါစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက်သင့်လျော်သောပုံစံ (jpg, png, gif နှင့်အခြားအရာများ) ကိုအသုံးပြုခြင်း - အောက်ဖော်ပြပါပုံစံအမျိုးမျိုး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
အရေးကြီးချက် - ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိရုပ်ပုံတစ်ခုစီ၏အတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ခြင်း - မလိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုမဖြုန်းတီးစေရန်ရုပ်ပုံ၏အမှန်တကယ် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သည့်ပုံရိပ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြသခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆိုက်ကြီးလေမိုဘိုင်းဖုန်းများလေလေ ပို၍ အရေးကြီးလေဖြစ်သည်။
တုံ့ပြန်မှုကိုက်ညီမှုရှိစေရန် - အကယ်၍ သင်သည် WordPress နှင့်ခေတ်မီပုံစံတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ပါကဤထောင့်ကွက်ကိုသင်ပိတ်လိုက်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ မဟုတ်ပါကဆိုက်ရှိပုံများ၊ အထူးသဖြင့်စာများအတွင်းရှိရုပ်ပုံများသည်တုန့်ပြန်မှုရှိပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ တက်ဘလက်များစသည်တို့ကိုကောင်းစွာပြသနိုင်ရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်။
အရည်အသွေးကိုသိသိသာသာယုတ်ညံ့စေခြင်းမရှိဘဲပုံ၏အလေးချိန်ကိုအများဆုံးချုံ့ခြင်း (ကိရိယာများနှင့်နည်းလမ်းများကိုတိုးချဲ့ခြင်း - အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
မည်သည့်ရုပ်ပုံများကိုမဆိုဒီဂရီသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုသို့ချုံ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာကိုသာအသုံးပြုရန်နှင့်ဆိုက်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသထားရန်နှင့်ပုံ၏အလေးချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။ မည်သည့် site ကိုမှဤသည်မှန်သည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ပုံများများများရှိသောဆိုဒ်များအတွက်။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်မှန်ကန်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုမျှမရှိသော်လည်းအထူးအလေးထားသည့်ပြခန်း/slider ပုံမဟုတ်လျှင်ပုံ၏အလေးချိန်သည် ၇၀-၈၀ ကီလိုဂရမ်ထက်မကျော်လွန်စေရန်သေချာသည်။
Google ရှာဖွေမှုတွင်ရုပ်ပုံများရှာဖွေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပုံရိပ်ကိုပြသရန်အတွက်များစွာသော parameters များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာဖိုင်အမည်ဖြစ်သည်။ နောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးပုံတွင်သင်မြင်သည့်အရာကိုဖော်ပြသည့်အမည်ပေးရသည်။ ဖိုင်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသိမ်းထားရန်နှင့်နေရာလွတ်မဟုတ်ဘဲအလယ်လိုင်းများကိုသုံးရန်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဂူးဂဲလ်သည်အလယ်အလတ် dash များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းသည်
သင်စိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက် - ဟုတ်ကဲ့၊ ဂူဂဲလ်သည်အခြားဘာသာစကားများအတွက်အင်္ဂလိပ်ပုံအမည်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိသည်။ ရှာဖွေရေးညှို့များကိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်ကိုသိပြီးရှာဖွေထားသောရလဒ်များတွင်ဘာသာပြန်ထားသောစကားလုံးများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
3. ပုံရိပ်မှ ALT
alt tag သည်ရွေးချယ်မှု၏အတိုကောက်ဖြစ်သော၎င်းသည်ပုံကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သော parameter တစ်ခုဖြစ်သည်။ Alt tag ကို image တစ်ခုချင်းစီအတွက် management system/HTML code တွင်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မူလလုပ်ဆောင်ချက်မှာမျက်မမြင်များနှင့်မသန်စွမ်းသူများကိုအထူးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကို သုံး၍ ထို tags များကိုစကင်ဖတ်ပြီးဖတ်သည့်အရာကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာပိုင်းအရ code ထဲမှာဒီလိုပုံစံရှိတယ် -
၀ က်ဘ်ဆိုက်အလွယ်တကူဖွင့်ဆိုနိုင်မှုအရ tag ၏အရေးပါမှုအပြင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ alt tag သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအားပုံ၏အကြောင်းအရာကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ (ဖိုင်အမည်၊ ဖိုင်၏စာမျက်နှာအခြေအနေနှင့်စသည်ဖြင့်) နှင့်၎င်းသည် Google ရှိပုံရှာဖွေမှုကိုလည်းသဘာဝကျစေသည်။
ထို့အပြင် alt tag သည်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ပုံမှပြင်ပ link တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါက alt tag သည်ပုံ၏စာသား anchor ("anchor text") အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
ပုံတစ်ပုံမှာ ALT tag ရှိမရှိဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ။
ပုံတစ်ပုံလုံး - mouse ကို သုံး၍ ပုံကိုနှိပ်ပါ -> right-click -> element တစ်ခုကိုစစ်ဆေးပါ (ဒီစာလုံးသည်ကွဲပြားသော browser (ဘရောက်ဆာ) များအရကွဲပြားသည်) ။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သောအတိုင်း <img> command အတွင်းမှ tag ကိုရှာချင်သည်။
Web Developer လို့ခေါ်တဲ့ plugin ကိုသုံးပါ။ ဒီ extension ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ပုံများရှိ alt tags အားလုံးကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဖားအော်သံ - site ပေါ်တွင်ပုံများစူးစမ်းစစ်ဆေးလိုပါကဖားသင့်လျော်သည်။
scan လုပ်ရန် URL ရိုက်ထည့်ပြီးပုံများ tab ကိုနှိပ်ပါ။
ALT tags များမပါသောပုံများ
အက္ခရာ ၁၀၀ ကျော်ပါသည့် ALT tags များပါသည့်ပုံများ (သင်၎င်းတို့ကိုနည်းနည်းတိုစေသင့်သည်)
ဒီနေရာမှာနည်းလမ်းများစွာနဲ့ပလပ်ဂင်အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့်ငါဒီနေရာမှာအကြောင်းအရာလိုအပ်ချက်၊ စာမျက်နှာတစ်ခုစီနှင့် site ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိသည်ဟုထင်ရသည်။
ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်မြှင့်တင်ရေး - ALT tags တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်များ
အကယ်၍ ရုပ်ပုံဖော်ပြချက် + သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများကိုသဘာဝကျကျထင်ရှားစွာဖော်ပြရန်ပေါင်းစပ်လျှင် - ဘာကောင်းလဲ။
ဖော်ပြချက်ကိုချဲ့ကားပြောဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ 2-5 word alt tag သည်လုံလောက်ပါသည်။
ပုံတွင် alt tag နှင့် title tag မတူပါကအကြံပြုသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များအတွက် - အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းတွင်စံပြနံပါတ်ရှိပါက၎င်းသည် (ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်ရှာဖွေမှုတွင်ပေါ်လာရန်) alt tag တွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
နောက်ခံပုံများ/အလှဆင်ထားသောရုပ်ပုံများအတွက် alts ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားနေသည်ဟုဂူးဂဲလ်ကသံသယမဖြစ်စေရန်အကြံပေးလိုပါသည်။
4. ပုံတစ်ပုံအတွက်ခေါင်းစဉ် tag
Image captions, ဒါမှမဟုတ် Captions, ဆိုတာမောက်စ်ကိုပုံတစ်ပုံပေါ်ရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့ tooltip အမျိုးအစားတစ်ခုပါ။ လူအများစုကသူတို့ကို ALT tags များနှင့်ရောထွေးနေသည်။
ပုံရိပ်ခေါင်းစဉ်များသည်ရုပ်ပုံ၏ဆက်စပ်မှုနှင့်အကြောင်းအရာ၏နောက်ထပ်အရိပ်အယောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်အားပုံရိပ်ပြောနေသည့်အရာကိုနားလည်စေရန်နှင့်၎င်း၏ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ALT tag နှင့်မတူဘဲခေါင်းစဉ် tag များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုဖော်ပြရန်နှင့်ကြာကြာအနည်းငယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုံတွင်တွေ့ရသောအရာနှင့်/သို့မဟုတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်လာမည်ကို surfer အားဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ သတင်းဆိုဒ်များသည်ဤ tag ကိုမကြာခဏအသုံးပြုသည်။
<img class="alignnone wp-image-1323 size-full" title="Example title image">
၅။ ပုံအမျိုးအစားများနှင့်ဖိုင် extension များ
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများအတွက်ဘုံပုံစံများရှိသည်။ ငါသူတို့တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်အတိုချုပ်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်:
JPEG/JPG - ဝဘ်ပေါ်မှပုံရိပ်များအတွက်အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးပုံစံ။ JPG ပုံစံ၏အားသာချက်မှာအရည်အသွေးမြင့်မား။ အလေးချိန်နိမ့်သောပုံများကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ JPG ပုံရိပ်များသည် opacity ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
GIF - floppy disk တွေရှိတုန်းကတည်းက GIF ပုံစံဟာငါတို့နဲ့အတူအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ Gifs များသည်အရောင် ၂၅၆ ခုကိုသာထောက်ပံ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးနိမ့်ကျသည့်ပုံရိပ်ပုံစံဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်အိုင်ကွန်များသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်မှုများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ GIP format က animation ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ Facebook တောင်မှဒီပုံစံကို feed ထဲမှာထည့်ပေးတယ်။
Bottom line - gifs များသည်ရုပ်ပုံများကိုအထူးသဖြင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများအတွက်မဟုတ်ဘဲပိုမိုရိုးရှင်းသော icon များ၊ animations များနှင့် element များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
PNG - ဒါကစည်းစနစ်အသစ် (အတော်လေး) အသစ်ဖြစ်သည်။ PNG ဖိုင်များ၏အဓိကအားသာချက်များ - JPG နှင့် GIF တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ PNG ဖိုင်များကို PNG24 အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည် - အရည်အသွေးပိုကောင်းသည့် PNG24 (နှင့်ပုံ၏အလေးချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း) နှင့် PNG8 အားလုံးအကုန်အကျအများဆုံးဖြစ်သည်။
သိကောင်းစရာ - Photoshop ကိုသုံးသောသူများအတွက်၊ web အတွတ် Save နှင့် အသုံးပြု၍ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအကြားပုံအလေးချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည် (ဖိုင်ကိုမသိမ်းမီပုံအလေးချိန်၏အကြိုမြင်ကွင်း) ။
ကိစ္စအများစုတွင် JPG ပုံစံသည်အလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည်။ JPG ပုံရိပ်တွေကအရည်အသွေးမြင့်ပြီးဖိုင်အလေးချိန်နည်းတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သောဖိုင်ကြီးများတွင် GIF ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဖိုင်အလေးချိန်သည်ကြီးမားလိမ့်မည်။ ပုံစံကိုဤအတွက်ဒီဇိုင်းမထားပါ၊ သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသောဒြပ်စင်များနှင့်အသုံးပြုရန် ပို၍ သင့်တော်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပါက PNG ပုံစံကိုသုံးပါ။ ရုပ်ပုံများ၏အလေးချိန်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျစေရန် PNG24 နှင့် PNG8 ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။
Thumbnails (previews) သည်အချို့သောဆိုဒ်များအထူးသဖြင့်ပြခန်းအခြေပြုဆိုဒ်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များအတွက်အရေးပါပြီးအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Thumbnails ("Google Translate" ၏ "Thumbnails") သည်တစ်ဖက်တွင်ကြီးကျယ်သော်လည်း၊ ဆိုက်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုသိသိသာသာဖျက်စီးနိုင်သည်။
ဤရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရာတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရည်အသွေးနှင့်အလေးချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျစေရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားစာမျက်နှာများနှင့်ထုတ်ကုန်အကြိုမြင်ကွင်းများကိုပြသရန်သမ်းနေးကိုအားကိုးသည့်ကြီးမားသောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များတွင်ဤအချက်သည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုတင်ရန်နှောင့်နှေးနေသောစက္ကန့်တိုင်းအမေဇုံကိုတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံကုန်ကျသည်ကိုသင်သိပါသလား ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များပေါ်တွင်တင်ရန်အချိန်အများစုမှာပုံများဖြစ်သည်။
မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဤပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရန်သာစိတ်ကူးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်သိတယ် - ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကအောက်ခြေကနေသေးငယ်တာတွေကနေစတယ်။ များလေလေပိုကောင်းလေလေပဲ။
သေးငယ်သောအရာနှင့်သေးငယ်သည့်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာအတွက်ပုံကြီးကိုဖန်တီးရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ ရုပ်ပုံကြီးကိုသမ်းနေးအဖြစ်မသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်ဆိုဒ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကြိမ်များစွာတင်ဆောင်လိမ့်မည်။ CMS စနစ်အမျိုးမျိုးတွင်သင်သည်ဤပြissueနာမှအလိုအလျောက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
ဒါကြောင့် image optimization rules များနှင့်ပတ်သက်လာရင်၊ thumbnail တွေထက်ကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - Image Sitemap (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် extension) တွင်သမ်းနေးများကိုမထည့်ပါ၊ အချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းတို့အတွက် ALT tag များကိုတောင်မသတ်မှတ်ပါ။ ရည်မှန်းချက်မှာဂူဂဲလ်သည်ပုံကြီးများကိုအနိူင်ရူပဗေဒကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်ကိုစကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်ဖော်ပြရန်နှင့်ရုပ်ပုံပေါ်တွင်နှိပ်ပြီးနောက် surfer မြင်ရမည့်အရာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ပြရန် Image Title Thumbnails ကိုသတ်မှတ်ရန်အကြံပြုသည်။
အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၌ထုတ်ကုန်များစွာ (၃၀ ကျော်ဆိုပါက) ရှိလျှင် surfer scroll လုပ်သည့်အခါမှသာtheရိယာသို့ပုံများတင်သော Lazy Load script ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
အများအားဖြင့်, ပုံရိပ်တွေစာသားအစေခံရန်လာနှင့်အခြားလမ်းန်းကျင်မဟုတ်။ သို့သော်ဓာတ်ပုံပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်မြှင့်တင်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်ရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသည့်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းသည်အခြေခံအကြောင်းအရာများဖြစ်သည့်တိုင်စာသားများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမပြုသင့်သည်။
သန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောအနိမ့်ဆုံးဆန်သောအမြင်ကိုထိန်းသိမ်းလိုသောသူများအတွက် (ဥပမာဓာတ်ပုံဆရာအစုစု ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်) ပုံတစ်ပုံပါသည့်စာမျက်နှာတိုင်းတွင်သူကအနည်းဆုံးအောက်ပါသတ်မှတ်ရန်အကြံပြုသည်။
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောတိုတောင်းသောဖော်ပြချက် (စကားလုံး ၁၀-၂၀ ပင်လျှင်ဘာမျှမကပိုကောင်းသည်)၊ သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးနှစ်လုံးနှင့်ပိုကောင်းသည်
ခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်သည်သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည် (အကယ်၍ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြခန်းမှပေါ်လာသည့်ပုံမဟုတ်ပါ) ။
Alt နှင့်ဓာတ်ပုံခေါင်းစဉ်များ - ဤကိစ္စတွင်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
Image Sitemap (image-sitemap.xml) က Google ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကိုပိုမိုဖတ်ရှုရန်နှင့်ရည်ညွှန်းသည်။ standard XML sitemap နှင့်ဆင်တူသည် sitemaps ၏apsရိယာရှိ Search Console ကိုအသုံးပြုပြီးပုံများ Sitemap ကိုတင်နိုင်ပါသည်။
Search Console တွင် Sitemap ထည့်ပါ
အထူးသဖြင့် scripts များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည့် galleries အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည့်အခါ Google ၏သမားရိုးကျစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ခက်ခဲသောပုံရိပ်များပုံ၏ Sitemap သည်အထူးအသုံးဝင်သည်။
ပုံ၏ Sitemaps အသုံးပြုရန်အတွက် parameters အချို့ရှိပါသည်။
WordPress - ပုံမှန်အတိုင်းသင် WordPress ကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ဘဝသည်လွယ်ကူပါသည်။ Udinra All Image Sitemap plugin သည်သင့်အတွက်ထောင့်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ သင်လုပ်ရန်မှာ plugin ကို install လုပ်ရန်၊ ချိန်ညှိချက်များတွင် V အချို့ကိုအမှတ်အသားပြုရန်၊ sitemap ဖန်တီးရန်နှင့် Google Console မှတစ်ဆင့်ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။
အခြားမည်သည့်ပလက်ဖောင်းတွင်မဆို၊ အကယ်၍ ပလပ်ဂင်ကဲ့သို့သော Out-box ဖြေရှင်းချက်မရှိပါက Screaming Frog ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဖားကသင့်ကိုအလွယ်တကူပုံဖော်နိုင်အောင်ကူညီသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာ - ၎င်းသည် (ပလပ်အင်နှင့်မတူသည်) အလိုအလျောက် update လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်တိုင်းအားလန်းဆန်းစေမည်
တောင်းဆိုထားသော site ကိုအပြည့်အဝစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဆော့ဝဲ၏ထိပ်မီနူးတွင် Sitemaps -> Create Images Sitemap သို့သွားပါ။ သင်ရရှိမည့်အရာကိုရှာရန် Console မှတဆင့်အသုံးပြုရန်နှင့်ဖွင့်ရန်အတွက် kosher XML ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မူလရုပ်ပုံများကို (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်ထုတစ်ခုကဲ့သို့) တွင်များစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများသည်အဓိကအရာသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဆိုဒ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါကသုံးစွဲသူများအားလူမှုရေးပေါ်တွင်ပုံများဝေမျှရန်အားပေးခြင်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသည် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်၎င်းတို့အားပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် WordPress ပလက်ဖောင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များရှိသည်။ အခြားစနစ်များတွင်ပရိုဂရမ်မာကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်သို့မဟုတ်၎င်းတွင်သီးသန့်ပလပ်အင်တစ်ခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် WordPress တွင်ကောင်းမွန်သောပလပ်အင် ၂ ခုရှိသည်။
WordPress အတွက်လူမှုရေးပုံရိပ် Hover - Paid plugin (em; လက်သည်းဆိုးဆေး - ဒေါ်လာ ၁၇) ။
Pinterest Pin it Button - ဆိုဒ်ရှိဓါတ်ပုံများသို့ Pinterest အိုင်ကွန်လေးတစ်ခုထည့်ပေးသော plugin တစ်ခု။
မင်္ဂလာပါ ဓာတ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းတွင်အထူးအဆင်ပြေစွာဆွဲယူနိုင်သည့်ဆွဲအားဖြင့်ချုံ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု။ ၎င်းတို့တွင်သင့်အားပိုများသောပမာဏနှင့်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော API တစ်ခုလည်းရှိပြီး၊ ထို site ရှိပုံများအားလုံးကိုချုံ့ရန်ခွင့်ပြုသည့် WordPress အတွက်အလွန်ကြီးစွာသော plugin တစ်ခုလည်းရှိသည်။ သူတို့၏ API ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် (တစ်လလျှင်ပုံရိပ် ၅၀၀ အတွက်အခမဲ့) ။
Fotosizer - ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကောင်းမွန်သော desktop ဆော့ဖ်ဝဲ - ချုံ့ခြင်းသာမကအရွယ်အစားလျှော့ချခြင်းသာမကရုပ်ပုံများနှင့်အခြားကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များသို့အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းခြင်း။
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသင်အခုပဲနားလည်ထားပြီ။ Semalt ၏ကျေးဇူးကြောင့်သင်၏ site ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုသိလိုလျှင်၎င်းကိုအခမဲ့လုပ်နိုင်သည် SEO တိုင်ပင်ဆွေးနွေး။
Semalt သည်သင်၏ site နှင့်ဆက်စပ်သော SEO ပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Semalt ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည် သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။